Mayelana NATHI - Leyu Electric Co., Ltd.
Ukuhlinzekwa kwamandla kagesi we-LRS Series
Ukuhlinzekwa kwamandla kagesi we-NES Series
I-S Series Power Output Power Supply
Ukuhlinzekwa kwamandla kagesi webhethri ye-UPS
Isiguquli seDC DC
Ukunikezwa kwamandla we-PFC
Ukunikezwa Kwamandla Okushayela Amanzi Okushayela Amanzi
Ukunikezwa kwamandla kagesi wesitimela
I-Multiple Output (D. T .Q) Ukunikezwa Kwamandla
Ukuphakelwa Kukagesi Okuncane
Ukunikezwa kwamandla we-CCTV
Ukunikezwa Amandla Okuphezulu
Inverter ehlanzekile yamandla we-Sine Wave
I-Pure Sine Wave Inverter Eneshaja
I-Modified Sine Wave Inverter Neshaja
"UZhejiang Leyu Electric Co., Ltd." ngaphambili yayiyi "Yueqing Leyu Electric Co., Ltd." esungulwe ngo-2007 Ukuqamba kabusha igama yisidingo sokwandisa amasheya nokwandiswa kwemakethe.
Le nkampani itholakala embusweni kagesi we-wenzhou yueqing, umnotho othuthukile, ifa elicebile, ukuthuthwa komoya namanzi, ujantshi nomgwaqo omkhulu, ithrafikhi ilula kakhulu.
Ukunikezwa kwamandla okukhulu, i-off-grid inverter yelanga, isilawuli selanga, inkinobho yokudlulisa, njll.
----- Ngo-2009, inkampani yaphendukela emkhakheni wezohwebo lwangaphandle, futhi yathola isitifiketi seziqu.
----- Ngo-2013, uMnyango Wezohwebo Wangaphandle wasungulwa, futhi imakethe yanda isuka eningizimu-mpumalanga ye-Asia iye eYurophu nakwezinye izindawo.
----- Ngo-2015, ifektri yalungiswa yathuthela efektri.
----- Ngo-2018, ibhizinisi lokuhweba langaphandle lanwetshwa laba yiShenzhen futhi kwasungulwa igatsha.
- Ekuqaleni kuka-2020, uMnyango Wezokuhwebelana Kwangaphandle wasuka ngokusemthethweni efektri waqonda ngaphesheya kweYueqing Ali futhi eduzane neTimes Square.
----- Ekupheleni kuka-2020, umnyango wezokusebenza wamazwe omhlaba unabantu abangu-7, ohlanganisa amapulatifomu amaningi afana ne- "International Station", "AliExpress", "Made in China", "Foreign Trade Express", "Google", I- "Taobao" ne- "Tmall".
----- Ngo-2021, ngaphansi kwenkinga yamalungelo, bese usungula enye inkampani entsha.
Inkampani yakwaLeyu izibophezele ukudala umkhiqizo omuhle kakhulu, ukuhambisana nokucabanga okusha, umqondo wokuqamba, ungaqhubeka ukuhlinzeka amaklayenti ngekhwalithi ephezulu nensizakalo esezingeni eliphakeme, insizakalo eqotho, idumela elihle, idumela elihle, imikhiqizo kagesi yakwaLeYu ithunyelwe eYurophu nase-United States, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eNingizimu Melika, e-Afrika nakwezinye izindawo, kuthengiswe phesheya kwezilwandle ngaphezu kwamazwe nezifunda ezingama-50.
Le nkampani ifakwe ubuchwepheshe bokukhiqiza besimanje nemishini yokuhlola emihle kakhulu.
Le nkampani inamandla amakhulu wezobuchwepheshe, imishini eyinkimbinkimbi, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, izindlela ezinhle kakhulu zokuthola, i-3 ‰ standardization ingaphezulu kakhulu kukazwelonke we-3%, ukusebenza okuzinzile, umthwalo wemikhakha, ikhwalithi enhle kakhulu.
Ithimba lethu "Leyu" lomthengisi wangaphandle liqukethe abantu abasha abanamandla futhi abagcwele amaphupho. Ngokuhlangenwe nakho okulingene kokusebenza kweminyaka emithathu, bazimisele ukwenza imizamo ngokuhlanganyela yokwakha inkampani ibe yinkampani kagesi esezingeni lokuqala, okuyinjongo yethu. Inkampani yethu ibhizinisi lobuchwepheshe obuhlanganisa ucwaningo lomkhiqizo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Ikesi lokukhombisa isitifiketi somkhiqizo kaLeyu Electric
ILeyu Electric isungulwe iminyaka eyi-14 futhi inikezwe isihloko senkampani yokuphatha enhle kakhulu, iyunithi esezingeni eliphakeme, ucwaningo oluyingqayizivele nentuthuko, isisekelo esijulile, ukwenziwa okuhle, okwenza ikhwalithi yethu yomkhiqizo ihlale isendaweni ephezulu embonini.
Imikhiqizo iqinisekiswe nge-CE, ROHS, CCC, IP67 ne-IS09001.
U-Leyu unonjiniyela abangochwepheshe ukuthi babambe iqhaza ekwakhiweni nasekuthuthukisweni, umugqa omkhulu wokukhiqiza wanele ukufanisa izidingo zamakhasimende, izinsizakalo ezenziwe ngezifiso kungathiwa zihlinzeka ngezidingo zokuklama nokuthuthuka kwamakhasimende.
ILeyu Electric Co., Ltd.
Ucingo: + 86-18906669219
Dc Inkinobho Shintsha, Ishaja Isilawuli Solar, isilawuli seshaja yebhethri yelanga, Lw26gspad-Lock Uhlobo Shintsha, I-Solar Power Converter, Ishaja Yesilawuli Solar,